मेरो योगदानलाई जनताले कदर गर्छन् | nepalbritain.com
मेरो योगदानलाई जनताले कदर गर्छन्
सुवास नेम्वाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार इलाम–२
इलाम क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार सुवास नेम्वाङले अब तीनै तहमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । विकास निर्माण, स्थिरता, संविधान कार्यान्वयनका लागि र आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्नका लागि वाम गठबन्धन भएको नेता नेम्वाङले बताए । इलाम–२ को विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएकाले फेरि पनि आफूलाई जनताले निर्वाचत गरेर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पु¥याउने विश्वास नेता नेम्वाङले लिए । सहकर्मी हेमप्रकाश ओलीले नेता नेम्वाङसँग गरेको कुराकानी–
० प्रचार प्रसार अभियान कस्तो छ ?
– इलाम–२ का साबिक गाविसका सबै ठाउँमा पुगिसकेको छु । अब हामी आमसभा गर्ने चरणमा पुगेका छौं । २–३ स्थानमा हामी आमसभा गरेर निर्वाचनको कार्य सम्पन्न हुन्छ ।
० मंसिर १० मा खसेको मत प्रतिशतलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– निर्वाचनका लागि जनताको व्यापक उत्साह थियो, जनता खुशी थिए । त्यसैले निर्वाचनमा जनसहभागिता व्यापक रहन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचनको सहभागिताले त्यही कुरा देखाउँछ । हामी संविधानको ठोस कार्यान्वयतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । यो उत्साहपूर्ण छ, मलाई खुसी लागेको छ ।
० स्थानीय तहको भन्दा कम मत खस्यो नि ?
– तलमाथि अलि अलि हुनु स्वभाविक हो । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन हिमाली जिल्लाको हो, जुन निर्वाचन मंसिर १० धेरै ढिलो हो, हामीले पहिला यो निर्वाचन मंसिर ४ गते तोकेका हौं, सरकारले हामीसँग सल्लाह नगरी एकतर्फीरुपमा मंसिर १० र २१ गते पु¥यायो । यो गलत भयो भनेर हामीले भनेका हौं । मंसिर १० गते हिमाली क्षेत्रमा साहै्र अप्ठ्यारो गरी जनता अडिए । उहाँहरु हिउ पर्न थालेको, चिसो बढेकाले बेसी झर्न चाहनुहुन्थ्यो । त्यसैले जति भयो, एकदमै राम्रो भयो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० जनताले दलहरुको गतिविधि रुचाएनन भन्ने कुरा आएको छ नि ?
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन, कोही साथीहरुलाई त्यस्तो लागेर विश्लेषण गर्नुभयो होला । तपाईको प्रश्नसँग म सहमत छैन । चिसोका बाबजुद मंसिर १० सम्म जनता दलहरुको आग्रहमा हिमाली क्षेत्रमा अडिए ।
० इलाम–२ का जनताले तपाईंबाट के अपेक्षा गरेका छन् ?
– साविक गाविसका आधारमा म सबैतिर पुगिसके । एक दुई स्थान बाँकी छ, त्यो आजभोलिसम्म टुगिन्छ । साबिक एउटा गाविसमा ३–४ स्थानमा कार्यक्रम गरेको छु । बाक्लो ढंगले जनताको बीचमा पुगेको छु । यो क्षेत्रमा २०५६ सालदेखि चुनाव लड्न थालेको हुँ । त्यसअघि म राष्ट्रिय सभामा थिएँ । २०५६ सालमा चुनाव लड्दा जनयुद्ध चलिरहेको थियो, त्यसबेला गाउँ जानसक्ने अवस्था थिएन । जनयुद्धलगायतलाई सम्बोधन गर्न हामीले संविधानसभा बनायौं । जनता स्पष्ट छन् । उनीहरुले संविधान बनाउने प्रयासका अवधिमा जनतालाई समृद्ध बनाउने आधार तयार गर्न लाग्नुस् भनेर प्रष्ट भनेका थिए । हामीले त्यसै ग¥यौं । जनताकै आर्शिवादले म संविधानसभाको अध्यक्ष भएँ, सबै दलले मलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष बनाए । जनतामैत्री, ऐतिहासिक संविधान लेखन गरेर संविधान जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्न हामी सफल भयौं । मेरै नेतृत्वमा पहल र प्रयासमा हामीले सबै दललाई एकताबद्ध बनाएर यो काम ग¥यौं । यो कुरा जनताले बुझेका छन् । जनताले केही कुराका आधारमा अब संविधान कार्यान्वयन र विकास निर्माणको काममा अगाडि बढ्नुपर्छ । तपाईंहरुले सकेसम्म हाम्रो विकास गर्नुपर्छ, अब विकास नै अर्जुनदृष्टिका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने जनताको भनाइ छ ।
० इलाम–२ मा के योगदान दिनुभएको छ र तपाईंलाई भोट हाल्ने ?
– जनताले संविधान निर्माणको पक्ष हेरिसकेका छन् । गाउँमा छिर्नसम्म नसक्ने अवस्थाको द्वन्द्वलाई हामीले सम्बोधन गर्दै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने काम गरियौं । जसमा नेतृत्व, पहल र प्रयास मेरो रह्यो । यो कुरा जनताले बुझेका छन् । अर्को यही अवधिमा विकास निर्माणमा सकेसम्मको काम गर्छु है भनेको थिएँ, गरें । ०५६ सालदेखि निर्वाचन लड्न सुरु गरेको हुँ, त्यसबेला इलाम–२ बाहिरबाट हेरेजस्तो थिएन । इलामको कर्णाली भनिने २ नम्बर क्षेत्रमा म चुनाव लडिरहँदा एउटा विजुलीको बल झुण्डिएको थिएन । १ किमी गाडी गुड्ने कच्ची सडक थिएन । टेलिफोन लाइन आँमचोक र युहाङ गाविसमा थिए, त्यो पनि भत्केको अवस्थामा थियो । पुल थिएन । यी चार कुरालाई परिवर्तन गर्ने मेरो प्रयास रहन्छ भनेर मैले जनतामा प्रष्टसँग राखेको थिएँ । अहिले त्यही सन्दर्भमा जनता हेरिरहेका छन् । अहिले इलाम–२ मा हेर्नुस्, सयौं पुल निर्माण भएका छन्, ४८ करोड रुपैयाँसम्मको लागतमा मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन् । केही बन्नेक्रममा छन् । २–३ वटा गाविसलाई छोडेर बाँकी विद्युतीकरण भएका छन् । दुर्घटनाको कारणले एउटा गाविसमा विद्युतिकरण रोकियो । २ वटामा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ । बाँकी ठाउँमा निर्वाचनलगत्तै विद्युतीकरण भइसक्छ । नेपालटार–मंगलबारेसम्म बाटा कालोपत्रे भएका छन् । केही बाटो कालोपत्रे हुनेक्रममा छन् । केही बाटो स्तरोन्नति हुँदैछ ।
२ नम्बर क्षेत्रको विकासका कारण त्यत्तिबाट झापा झर्छन् । १ नम्बर क्षेत्र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका कारण विकास भएको छ, त्यहाँका जनता त्यत्तैबाट चारआली लाग्छन् । इलाम नगरपालिका मेरो क्षेत्र होइन । अहिले ओझेलमा प¥यो, त्यसलाई माथि उठाउन विभिन्न परियोजनाको कल्पना गरेको छु । काम गर्न सुरु गरिसकेको छु । यी कुरा मैले जनतासमक्ष राखेको छु । मैले चुलाचुलीको बसोबासको समस्यालाई हल गरेको छु । अहिले इलाममा जे परिवर्तन भएका छन्, त्यसबाट जनता खुशी छन् । जनताले देखेका छन्, अब विकासको काममा पूर्णरुपमा लाग्नुपर्छ भन्ने जनताको भनाइ छ ।
० वाम गठबन्धनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
– वाम गठबन्धनबाट जनता उत्साहित छन्, खुशी छन् । हामीले यो गठबन्धन कुनै व्यक्तिगत आग्रहमा गरेको होइन, कसैका विरुद्ध यो गठबन्धन छैन । यो गठबन्धन हामीले लोकतान्त्रिक परिपार्टी बसाउन गरेका हौं । वास्तवमा यसभन्दा अगाडि चुनाव लड्यो, चुनाव जित्यो, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धन गर्दै, सरकार बनायो ३–५ महिनामा सरकार लड्ने लडाउने खेलमा लाग्यो । हामीले यो परिपार्टी भत्काउने प्रयास ग¥यौं । विकास निर्माण, स्थिरता, संविधान कार्यान्वयनका लागि र आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्नका लागि हामीले वाम गठबन्धन गरेका हौं । हामीले गठबन्धन बनाएपछि कांग्रेसले पनि ग-यो, राजपा र फोरमले पनि ग¥यो । झन्डै ३ वटा गठबन्धन देखिन्छ, यो कत्ति राम्रो परिपाटी भयो । गठबन्धन गरेर घोषणापत्रका साथ जनतामा गएका छौं, जनताले छान्छन्, जसलाई आर्शिवाद दिने हो, उसलाई दिन्छन्, त्यो गठबन्धनले पाँच वर्ष सरकार चलाउँछ । यो लोकतान्त्रिक परिपाटी भयो, यसले स्थिरता, समृद्धि, संविधान कार्यान्वयन र आफ्नो काम र निर्णय आफै गर्नका लागि हामीले यो गठबन्धन गरेका हौं । जनता खुशी छन् । हाम्रा साझा वामपन्थी गठबन्धनले स्थानीय तहमा सरकार बनाइसकेको छ । प्रदेश र केन्द्रमा पनि बनाउँछ । र, हामीले भनेका कुरा लागू गछौं ।